IDredging Project e-Apollo Beach, i-FL to Deepen Channels & Expand Beach
Amalungiselelo Aqhubeka nge-Apollo Beach Dredging
UGator Dredging, usonkontileka osusa eFlorida, uzoqala ukukhipha imisebenzi ngasekupheleni kwale nyanga e-Apollo Beach, eFlorida.
Lesi sikimu sokudonswa phansi phansi sizoqala esiteshini saseNorth bese sidlulela eziteshini zaseNingizimu nasePort Pass ngoMeyi.
Uhlelo lwe-Apollo Beach dredging luzoqedwa ngasekupheleni kukaMeyi, luvimbele noma yisiphi isimo sezulu esibi noma ukungasebenzi kahle.
Lapho umsebenzi usuqediwe, iziteshi ezintathu eziholela kule ndawo zizohamba ngamamitha ayi-4 ngokujula ukuya kumamitha angama-71 / 2 ekujuleni okuphansi, kuvuleke ukufinyeleleka kwama-yachts nezikebhe zesikebhe manje njengamanje kufanele zilinde umgwaqo omkhulu ongena kuwo futhi ngaphandle kwendawo.
Ukudonswa kwemisebenzi kuzokwenzeka ngezinsuku zokusebenza zesonto.
Ngaphezu komsebenzi wokukhulula phansi, iphrojekthi izongena esikhundleni sogu olonakalisiwe e-60-acre Apollo Beach Nature Preservation.